Warbixin: Maxaad Kala Socotaa Maalinta Jacelka Aduunka(Valentine’s Day) Oo Ku Beegan 14 feb, Maxayse Diinteena Islamka Ka Tidhi Maalintan? | Lughaya.Com
Warbixin: Maxaad Kala Socotaa Maalinta Jacelka Aduunka(Valentine’s Day) Oo Ku Beegan 14 feb, Maxayse Diinteena Islamka Ka Tidhi Maalintan?	Added by webmaster on February 14, 2013.Saved under OpinionTags: featured	Notice: Undefined variable: counter in /home3/saylicip/public_html/wp-content/themes/city-desk/inc/theme-gallery.php on line 43
Maxaad ka taqaan maalinta jecelka Aduunka? Ma ogashay diinta islaamku in maalintan oo kale la weyneeeyo oo loo dabaal dago? Waa kumaa ninka loogu magacdaray maalintan? Arimahan ayaa isdul taagaynaa wax yar Akhriste:
Waxaan galaynaa meel walba oo ay gaaladu galaan waxaana samaynaynaa wax walba oo ay gaaladu sameeyaan, xataa waxaan la galnay cibaadadoodii iyo xusaskoodii ay ku waynaynayeen dad ama wax ay caabudi jireen.
Qoraalkaan waxaan ku sharixi doonaa waxa uu yahay Valentine’s & halku kaso bilowday & diintu waxa ay ka qabto.
Asalka Valentine’s Day ama maalinta jacaylka aduunka Maxay tahay?
Maalintaas waxay bilaabatay xilligii boqortooyada Roman ka. Romain kii hore, 14th Ferbruary waxay u ahayd maalin ay weyneeyaan Juno. Juno waxay ahayd boqorad kamid ah Ilaahyada Romanka. Romans ka waxay kaloo u aqoonsanaayeen Juno ilaaha haweenka & guurka, maalinta ku xigta oo ah 15th Feb, waxaa bilowda xuska Lupercalia oo isna ahaa wax ay caabudi jireen.
Taariikhda Valentine’s Day:
Nolosha wiilasha & gabdhaha waa ay kala fogayd xilligaas, wax yar ka hor u dabaal dagida Lupercalia magacyada gabdhaha Roman ka waxaa lagu qori jiray warqado isla markaana waxaa lagu dhajin jiray sabuurad, wiilasha dhalinyarada ah waxay ka dooranaayaan gabadha ay rabaan waxayna haysanayaan inta uu socdo dabaaldagaas, markaas kadib ayaa laga yaabaa inay ilmo ka dhex dhashaan oo ay kadib is jeclaadaan ama is guursadaan.
Maamulka boqortooyadii la oran jiray Emperor Claudius II Rome wuxuu gali jiray dagaallo dhiig badan uu ku daato. Boqor ka Claudius wuxuu ku dhibanaa in uu helo askar si uu u xoojiyo milatarigiisa iyo dagaalada uu galayo, wuxuu rumaysnaa in aynan raga Romans ka aynan rabin inay ka tagaan jeceelkooda & qoysaskooda, boqorkii Claudius wuxuu ka joojiyay boqortooyadii Rome guurkii oo dhan wuuxuna mamnuucay in la isguursado si ninku unaan u yeelan qof uu ku xirnaado.
Valentine xiligaas wuxu ahaa wasiir dhinaca kaniisadaha & diinta kana tirsanaa dowladii Claudius II. Isaga iyo Saint Marius waxay taageereen dhibanayaashii Christian (Kirishtanka) ahaa oo loo diiday guurka, dhowr qofna si qarsoodi ah ayay isugu dareen, arintaas daradeed Saint Valentine waa laqabtay waa la xiray waana la garaacayay ilaa uu ka dhinto.
Diinta Islaamka iyo xusaska ceynkan ah ?
Nebiga SCW ma qirin caadooyinka gaalada iyo wixii la caabudi jiray xilligii jaahiliyada. Anas RC waxaa laga weriyay in Nebiga uu yimid magaalada Madiina oo ay dadku leeyihiin 2 maalmood oo ay ciyaaraan. Wuxuu yiri maxay yihiin maalmahaan? Dadkii waxay ugu jawaabeen: waa maalmo aan ciyaari jirnay xilligii jaahiliyadda.
Nebiga SCW wuxuu yiri: Allaah wuxuu idinkugu beddelay 2 maalmood oo ka kheyr badan oo kala ah labada ciidood ee Carafada iyo ciidda Soon-fur.
Waxaa qortay: Sacdia Mohamed Nor.